Maahmaahda Toddobaadka | KONGOLISOLO
Dhowr qarniyo, xoolo-cuneenuhu had iyo jeer wuxuu naftiisa u siiyay raaxada helitaanka khasnadahayaga ama maalkeenna. Kumaa ama maxaa fududaynaya helitaankan fudud? Tani waa annagaa iska leh ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 6, 2020 00: 50 No Comments
Dabeecad ahaan, xayawaanka xayawaanka waxay leeyihiin door ah kor u qaadida wacyiga dadka dhalinyarada ah ee ku saabsan ixtiraamka deegaanka, ilaalinta dabiiciga iyo dhowrista noocyada xayawaanka. Si la yaab leh, ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 30, 2020 00: 45 No Comments
Dadka aan lahayn damiir taariikhi ah waa dad iyagu iskood isu laaya, waana dad u janjeera ama doonaya inay baaba'aan. Waxaa mahad leh taariikhdiisii ​​hore, taariikhdeeda, dhaqankeeda ...	Akhri wax dheeraad ah
Mid baa umadda ku xukumi kara weynaanta ummad ahaan habka ugu liita ee laguula dhaqmo halkaa! Ereyga "dadku" waa mid aad u ballaaran. Qeexitaanka "dadka" oo uu bixiyay Larousse du ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug12 06: 33